Marika sy sary masina amin'ny politika | Martech Zone
Famantarana sy iconografia amin'ny politika
Zoma Janoary 15, 2010 Alakamisy, Jolay 2, 2015 Douglas Karr
Tsy manohana fomba fijery politika manokana mihitsy aho. Mazava ho azy fa horonantsary noforonin'ny fikambanana tena mpandala ny nentin-drazana izay mino aho fa manitatra ny haben'ny sary an'ohatra sy ny fikasan'ny filoha Obama ary ny marika momba azy. Misy fampitahana tsy manam-paharoa an'i Bush sy Obama ary ny Repoblika mifanohitra amin'ny Demokraty izay mendrika horesahina ao amin'ny bilaogy Marketing.
Tsindrio ny horonan-tsary Iconography sy ny filoha Obama:
Tena tiako izany raha tsy nandrehitra ahy ianao tamin'ny fametrahana an'io (toy ny nataon'ny maro fony aho nanao ilay Obama Vista lahatsoratra). Sarotra foana ny miresaka politika fa ny fampiasana miavaka amin'ny marika, sary famantarana ary marketing amin'ny fampielezan-kevitra Obama sy ny filoha Obama trano Fotsy dia ary tsy mahagaga.
Ny fanontaniana iray dia ny hoe marika tsara ve ity hanohizana ny fanosehana eo ambany fiadidian'i Barack Obama? Raha izaho manokana dia heveriko fa làlana tena azo antoka ho an'ny Antoko Demokratika. Satria matanjaka lavitra noho ny marika DNC ny marika Obama, azo zaraina izay fahombiazana rehetra fa ny fianjerana rehetra dia azo averina any amin'ny marika manokana. Te hanana ny eritreritrao aho!
Tags: barack obamademokratyfamolavolanaiconographysary masinaObamasary masinapolitika
Mitondra Enterprise Analytics amin'ny WordPress
Fitiavana sy tsy fitiavana ny bilaogy marketing